शाहरुख खानको यस्तो दिन पनि आयो, अभिनयका लागि यतिसम्म भन्नुपर्‍यो | Ratopati
बुधबार २५ मंसिर, २०७६ Wednesday, 11 December, 2019
शाहरुख खानको यस्तो दिन पनि आयो, अभिनयका लागि यतिसम्म भन्नुपर्‍यो
शाहरुख खान एक उत्कृष्ट नायक हुन्, यसमा सायद कसैलाई शंका छैन होला । तर अब यस्तो दिन आइरहेको छ जब शाहरुख खानले आफ्नो अभिनय गर्नसक्छु भनेर भन्नु परिरहेको छ । स्मरण रहोस्, उनका पछिल्ला पाँच फिल्मले अपेक्षाअनुरुप प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । अब शाहरुखले आफूले अझै पनि २०–२५ वर्ष राम्रो अभिनय गर्न सक्ने बताएका छन् ।
शाहरुख खानले फिल्मबाट थोरै समयका लागि ‘ब्रेक’ लिएका छन् तर अभिनेताका अनुसार राम्रो सिनेमाका लागि उनमा अहिलेसम्म पनि निकै क्षमता छ । ५३ वर्षका अभिनेताको अन्तिम फिल्म ‘दिलवाले’, ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ र ‘जिरो’ थियो जसले दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएन ।
ममा क्षमता अझै छः शाहरुख खान
शाहरुख खानले पीटीआईसँग भने, ‘राम्रो कुरा गर्नका लागि जे कुराले मलाई प्रेरित गर्छ त्यो म बुझ्छु । मेरा वरिपरि त्यस्ता मानिसहरु छन् जसले उत्कृष्ट सिनेमा बनाउँछन् । र म बुझ्छु कि ममा राम्रो फिल्म गर्ने क्षमता अझै बाँकी छ । मभित्र अहिले पनि २०–२५ वर्ष राम्रो काम गर्ने क्षमता बाँकी छ ।’
आजकाल के गरिरहेका छन् शाहरुख खान ?
शाहरुख खान इन्डियन फिल्म फेस्टिबल अफ मेलबर्न (आइएफएफएम) मा मुख्य अतिथिको रुपमा आएका थिए । उक्त कार्यक्रमपछि उनले पीटीआईसँग कुरा गरेका थिए । शाहरुखले जिरो फिल्मपछि केही समयको ब्रेक लिने निर्णय लिएको र विभिन्न स्थानमा घुमेर नयाँ कहानी खोजी गरिरहेको बताए । ’
कति दिनको ब्रेकमा रहन्छन् शाहरुख खान ?
उनले भने, ‘मैले भर्खरै आफ्नो जुन अन्तिम फिल्म पूरा गरेँ त्यसको प्रदर्शन राम्रो रहेन तर म यसलाई हल्का रुपमा लिन्छु । म आफैंसँग यो भन्छु कि केही समययका लागि असफलताको स्वाद चाखौं । त्यसकारण मैले चार–पाँच महिनाको विश्राम लिएँ ।’
वौद्धिक भाषण दिइरहेको छुः शाहरुख खान
अभिनेताले भने, ‘म ब्रेकमा भएका कारण यहाँ मेलबर्न आएँ र यहाँका मानिसहरुसँग भेटघाट गरिरहेको छु । नयाँ कहानी र नयाँ कुराको खोजी गरिरहेको छु र वौद्धिक भाषण दिइरहेको छु ।’
नवाजुद्दिन सिद्दीकीकी २६ वर्षे बहिनीको निधन, ८ वर्षदेखि स्तन क्यान्सरबाट ग्रस्त थिइन्
कपिल शर्मा बने बुवा
छपाकको ट्रेलर लञ्चको क्रममा भरिए दीपिकाको आँसुः भनिन्, ‘ट्रेलर हेरेपिच्छे रोइरहेकी हुन्छु’
परिवारले सलमानलाई दिए बिग बोस १३ छोड्ने अल्टिमेटम !
विवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग अलग्गिइन् यी नायिका, बताइन् कारण
अवार्ड नपाउँदा रिसाए शाहिद कपुर, कार्यक्रमलाई बीचैमा छोडेर हिँडे
प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन
फिनल्याण्डका राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा मारिन नियुक्त
प्रेस काउन्सिलको आपत्ति
मनोजमणिलाई नेविसङ्घको नेतृत्वमा ल्याउन पौडेल पक्षको दबाब
‘बिहीबार बिदा छैन’
‘अवरोध हटेसँगै अब विकासले गतिलिन्छ’
‘पिँजडामा पालिएका कुखुराबाट उत्पादित अण्डा र मासु अस्वस्थकर’